जापानको भ्याक्सिन पासपोर्टबारे तपाईले थाहा पाउनैपर्छ यि कुराहरु | Nepali In Japan
गत सोमबारदेखि जापानले कोरोना भाइरस विरोधी खोप पूरा लगाएकाहरुबाट खोप पासपोर्टको लागि आवेदन लिन थालेको छ । निश्चित गन्तव्यमा जापानका बासिन्दालाई सहजतापूर्वक यात्रा गर्ने अवसर मिलोस् भनेर सरकारले सो पासपोर्ट जारी गरेको हो । इजरायलदेखि यूरोपसम्म कयौं देशले यस अघि नै खोप पासपोर्ट जारी गरिसकेका छन् । यो पासपोर्टबाहकलाई क्वारन्टिनका उपायमा छूट वा यात्रामा लगाइएको अन्य प्रतिबन्ध खुकुलो बनाइएका छन् । तर जापानले अन्य देशले जारी गरेको खोप पासपोर्टलाई तत्काल मान्यता नदिने देखिएको छ । यसले विदेशमा रहेका जापानी नागरिक लगायतमा चिन्ता र प्रश्न उब्जाएको छ ।
जापानको खोप पासपोर्टलाई कसरी प्रयोग गरिन्छ र यसमा के कस्ता जानकारीहरु हुन्छन् ?
खोप पासपोर्ट जापानी र अंग्रेजी दुबैमा उपलब्ध हुनेछ । यो जापानका बासिन्दाहरुलाई विदेशमा कठोर खालको यात्रा प्रतिबन्ध छल्न मद्दत मिलोस् भनेर ल्याउन लागिएको हो । जापानी खोप पासपोर्टमा निम्न अनुसार जानकारीहरु हुन्छः
खोप लगाएको मिति
पासपोर्ट जारी गरिएको नगरपालिका
सामान्यतः सरकारी कागजपत्रहरु जापानीमा मात्रै उपलब्ध हुन्छ । तर पासपोर्टलाई जापान बाहिर पनि सहजै प्रयोग गर्न सकियोस् भनेर जानकारीहरु अंग्रेजीमा पनि दिइएको हुनेछ । पासपोर्ट शुरुमा कागजमा मात्रै जारी गरिनेछ तर सरकारले यसको डिजिटल संस्करण पनि ल्याउनेबारे विचार गरिरहेको छ ।
कागजपत्र कसरी प्राप्त गर्न सकिन्छ ?
पूर्ण रुपमा खोप लगाएका मानिसहरुले आवासीय दर्ता भएको नगर कार्यालयमा विदेश भ्रमणमा जानु अघि खोप पासपोर्टका लागि आवेदन दिन सक्छन् । आवेदकले स्वयम् गएर वा अनलाइनबाट पनि आवेदन दिन सक्छन् । सरकारले छिटै पासपोर्टको डिजिटल प्रणाली पनि ल्याउनेबारे विचार गरिरहेको छ । पासपोर्ट निःशुल्क उपलब्ध गराइनेछ र आवेदन दिएकै दिन जारी गरिने व्यवस्था सरकारले मिलाइरहेको छ । सरकारी अधिकारीहरुका अनुसार आवेदन प्रक्रिया शुरुमा नगरपालिकाअनुसार फरक हुनेछ । आवेदनका लागि निम्नलिखित कागजपत्रहरु चाहिनेछः
खोप पासपोर्ट आवेदन फारम
खोप भौचर (आवेदकले आफ्नो खोप भौचर हराइसकेको छ भने व्यक्तिगत माई नम्बर वा आफ्नो ठेगाना देखाउने कागजपत्र पनि बुझाउन सकिनेछ)
खोप लगाएको प्रमाण
खोप पोसपोर्टमा राखिने जानकारीहरु स्थानीय नगरपालिकामा खोप रेकर्डमा दर्ता गराएका जानकारीमा आधारित हुनेछ । हुलाकबाट आवेदन दिनेहरुले आफ्नो हुलाक ठेगाना पूष्टि गर्ने कागजपत्रको एक प्रति र हुुलाक छाप लगाइएको खाम पनि बुझाउनु पर्नेछ । यसलाई खोप पासपोर्ट फिर्ता पठाउन प्रयोग गरिनेछ ।
तर खोप वितरणमा स्थानीय अधिकारीहरुको हात बाँधिएको अवस्थालाई दृष्टिगत गर्दा केही स्थानीय सरकारहरु पहिलो दिन देखि नै खोप पासपोर्ट जारी गर्न पूर्णतः तयार नहुन पनि सक्छन् । हाल जापानका करीब २० प्रतिशतले मात्रै कोभिड-१९ विरोधी खोप पूरा लगाएका छन् ।
खोप पासपोर्टको म्याद गुज्रिन्छ कि ?
अहँ । खोप पासपोर्टमा भएका जानकारीहरुलाई कसरी व्यवहार गर्नेभन्ने निर्णय गन्तव्य देशले गर्ने जापान सरकारले बताएको छ ।
छली रोक्न केही उपाय अपनाइएको छ कि ?
सरकारले आवासीय दर्ता कागजपत्रमा प्रयोग गर्दै आएको प्रतिलिपि सुरक्षा प्रविधि कार्यान्वयन गर्ने योजना बनाएको छ ।
जापानको खोप पासपोर्ट कुन कुन देशले स्वीकार गर्नेछन् ?
जापानको खोप पासपोर्ट बाहकलाई अष्ट्रिया, बुल्गेरिया, इटली, पोल्यान्ड र टर्कीमा प्रवेश प्रतिबन्धमा छूट दिइनेछ । विदेश मन्त्रालयले इष्टोनियाको नाम पनि पासपोर्टलाई मान्यता दिने देशको सूचिमा राखेको छ । इष्टोनियामा हाल कुनै पनि यात्रीले प्रवेशपछि आफूलाई सेल्फ-आइसोलेशनमा राख्नु पर्दैन । खोप लगाएका विशेष खालको व्यवसाय, पढाई र मानवीय कारण भएका यात्रीहरुले दक्षिण कोरियाको जान पाउँछन् । खोप पासपोर्ट लगायत खोप लगाएको प्रमाण भएकाहरुलाई १४ दिनको क्वारन्टिनमा छूट दिइनेछ । सरकारले पासपोर्टलाई मान्यता दिने देशको संख्या विस्तार गरेर ३० मा पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ । अन्य देशसँग सरकार अझै वार्तारत छ । हरेक देशसँग सहमति भएपछि सो देशको नाम सूचिमा थप गरिनेछ । जापानका लागि मुख्य गन्तव्यका रुपमा रहेका चीन र अमेरिका अझै पनि सूचिमा छैनन् । यी दुबै देशसँग सरकार अझै वार्ता गर्दैछ ।
कुन कुन देशले खोप पासपोर्ट प्रयोगमा ल्याइसकेका छन् ?
विदेश यात्रालाई सहज बनाउन कयौं देशहरुले डिजिटल कोभिड-१९ प्रमाणपत्र प्रयोग गर्न थालिसके । जुलाई १ देखि ईयूले पनि डिजिटल कोभिड प्रमाणपत्र प्रयोगमा ल्याएको छ । इजरायलले फेब्रुअरीमै यस्तो खालको प्रणाली शुरु गरेको थियो । तर पछिल्लो समय कोरोना भाइरसको संक्रमण बल्झिएपछि सो कार्यक्रम रद्द गरिएको छ ।
जापानको खोप पासपोर्ट बाहकलाई जापान फर्किदा १४ दिनको क्वारन्टिन छूट छ त ?
अहँ, जापानले सीमामा कठोर नियन्त्रण गरिरहेको छ । अहिले जापानी नागरिक, वैध आवासीय हैसिसयत भएका विदेशी बासिन्दा र विशेष खालको परिस्थितिमा भएका केही विदेशी नागरिकहरुलाई मात्रै प्रवेशको अनुमति दिइएको छ । जापानी खोप पासपोर्ट बाहकहरुले देशमा पुनः प्रवेश गर्दा कठोर खालको क्वारन्टिनको लागि तयार भएर आउनु पर्नेछ । जापानको अहिलेको सीमा नियन्त्रणका उपाय अन्तरगत देशभित्र छिर्ने सबै मानिसले डिपार्चर अघि ७२ घन्टाभित्र कोरोना भाइरसको परीक्षण गराएर नकारात्मक नतिजा आएको प्रमाण पेश गर्नु पर्नेछ अनि घर वा सरकारले निर्दिष्ट गरेको स्थलमा १४ दिन क्वारन्टिनमा बस्नु पर्नेछ ।
Prevजापानको पिआर अधबैंशे पोइ र कलिली श्रीमति
Nextशरिर ‘फिट’ राख्ने ५ जापानी तरिका